कृषिप्रधान देशमा कोदो नै आयात, अचाक्ली बढ्दै छ परनिर्भरता – Khabar Silo
कृषिप्रधान देशमा कोदो नै आयात, अचाक्ली बढ्दै छ परनिर्भरता
काठमाडौं । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोडको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब ६० अर्ब ५८ करोडको कृषिजन्य वस्तु थियो । आजभन्दा ४५ वर्षअघि मुलुक कृषिप्रधान देश थियो ।अर्थात् आर्थिक वर्ष २०३१/०३२ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान ७० प्रतिशत थियो । २०४१/०४२ मा ५१, २०५१/०५२ मा ४१, २०६१/०६२ मा ३५ र २०७६/०७७ सम्म आइपुग्दा २७ प्रतिशतसम्म मात्र छ । तरपनि कृषि प्रधान देशका नागरिक भनेर गर्व गरिरहेका छौं । कृषिजन्य बाहेकका बस्तु आयातको दर पनि वर्षेनी उकालो लागिरहेको छ । भलै पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांकले केही घटेको देखाएपनि । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कृषिजन्यसहित समग्र आयातको दरले अघिल्लो वर्षलाई उछिन्ने निश्चित छ ।
पहाडमा युवा समेत विदेश पलायनको क्रम बढेकोले धानखेती कम हुँदा चामलको आयात निरन्तर बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९मा ५० लाख ७२ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । त्यो वर्ष उत्पादन भएको धान अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । तर, पनि धान–चामलकै आयात बढी छ । यसबाहेक हेर्दा साना–साना लाग्ने वस्तु जो नेपालमै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिन्छ । तिनको आयात दर र मूल्य पनि कम छैन ।
सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो रकम कृषि क्षेत्रको विकासको लागि छुट्याउछ । नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गरी गरिबीको अन्त्य गर्ने, ठूलो संख्यामा रहेका कृषक परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्ने तथा सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायिकीकरण जरुरी छ भनी घोषणा पनि गरिएको हुन्छ । तैपनि कृषि क्षेत्रले आशातीत सफलता पाउन सकेको छैन । खाद्यन्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यन्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले जतिसुकै राम्रा योजना र ठूलै बजेट विनियोज गरे पनि त्यसको प्रतिफल मुलुकले महसुस गर्न सकेको छैन भन्ने सत्य वर्षेनी कृषि उत्पादनकै आयात बढिरहेको तथ्यले स्पष्ट पार्छ । समृद्धिको जतिसुकै गफ चर्किए पनि मुलुकको ब्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ । र, यसले अर्थतन्त्र क्रमशः जर्जर बनिरहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । तरपनि, कागजमा बाहेक अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने ठोश व्यवहारिक पहल भएको छैन ।
उत्पादनभन्दा आयातमा जोड दिएका कारण देशको अर्थस्थिति दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । यतिसम्मकी कुल बजेट हाराहारीमै व्यापार घाटा छ । अर्थविद्हरु भन्छन्– यसरी नै परनिर्भरता बढ्दै जाने हो भने आर्थिक अवस्था भयावह हुन्छ ।
झनपछि झन आयात गर्ने बस्तु र त्यसको मात्रा बढिरहेको छ । स्वदेशमा भएका सीमित उद्योग पनि बन्द छन् । चलेका पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नयाँ उद्योग खोल्ने ठोश प्रस्ताव छैन । हामीसँग अपार स्रोतसाधन र जनशक्ति छ । तर, त्यसको सदुपयोग नभएका कारण देशको आर्थिक हविगत क्रमश ओरालो लागिरहेको हो ।
पटक–पटकको राजनीतिक आन्दोलनस्र्रँगै व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आएन । यसको मुल कारण परनिर्भर अर्थतन्त्र नै हो । जबसम्म हामी उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सक्दैनौं तबसम्म भन्ने गरिएकोजस्तो समृद्धि संभव छैन ।
आम नेपालीको जीवनशैली क्रमशः भड्किलो बन्दै छ । हामी विलास्री बन्दै गएका छौं । तर, हाम्रो उत्पादन छैन । विदेशी उत्पादन किनेर रमाइरहेका छौं । हाम्री श्रम गर्न विदेश जान्छौं । अलिअलि पैसा कमाउँछौं । र, त्यही पैसा विलासी सामान किनेर विदेशै पठाउँछौं । यसले मुलुकलाई झन परनिर्भर बनाइरहेको छ ।
अहिले देशको मुल आवश्यकता उत्पादन बृद्धि हो । त्यसका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रमै जोड दिनुपर्छ । हामीसँग यतिधेरै स्रोतसाधन छ । तर, त्यसको प्रशोधन, उत्पादन र बजारीकरण गर्न सकेका छैनौं । मुलुक समृद्ध बनाउने हो भने उत्पादन र निर्यात बढाउनै पर्छ । तर, कृषिप्रधान देश कोदो र जलस्रोतको धनी देश पानीसमेत आयात गरेर समृद्धिको गफ चुटिरहेको छ ।
नेपाली बजारमा मारुती सुजुकीको एक्सएल-६ को मूल्य कति पर्छ ? यस्ता छन् विशेषता
मारुती सुजुकी एमपीभी एक्सएल ६ का दुई भेरियन्टमा नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । यसलाई मारुती सुजुकीको आधिकारिक वितरक सिजी मोटो कर्पले नाडा अटो शो २०१९ मा सार्वजनिक गरेको थियो । फरक स्टाइल, आकर्षक फिचर तथा पावरफुल इन्जिन समेटिएको एक्सएल ६ नेपालमा अल्फा र जेटा गरी दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छन् । एक्सएल–६ मा उपलब्ध के१५बी स्मार्ट […]
धनगढी । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका किसानलाई यतिबेला वर्षे धान बाली काटेर भित्र्याउने चटारो बढेको छ । धान बेचेर खर्चको जोहो गर्नुपर्ने हुँदा चाडबाडको समयमा पनि आफूहरुलाई धान भित्र्याउने चटारो बढेको स्थानीय कृषकले बताएका छन् । अधिकांश क्षेत्रफलको जग्गामा असार महीनामा रोपिएको धान यतिबेला पाकेर पहेँलपुर भएको छ । किसानको मुख्य आम्दानी स्रोतको रुपमा धान […]
खसिबोका प्रतिकिलो ५ सय ६० र च्यांग्रा ७ सय ४० रुपैयाँ, सरकारका तर्फबाट प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट
दसैंको समयमा झापामा बम बिस्फोट गराउने विप्लव माओवादीको योजना असफल
कलाकार शंकर बिसी लाई देखेर रोइन् निशा, सहयोग सहित पुगे अस्पताल (भिडियो हे’र्नुहोस्)
काठमाडौँमा एक महिना यताकै कम संक्रमित फेला, आज ३९१ जनामा संक्रमण पुष्टि
डा. रवीन्द्र पाण्डेले भने अब असार १ गते बाट आम रुपमा लकडाउन खुलाउदा हुन्छ (भिडियो सहित)
अबको ६ महिनाभित्र सबै उमेर समूह तेस्रो लहरको को’रोना संक्रमणको जो’खिममा
यी ३ राशिको हुन्छ सानै उमेरमा धनी बन्ने योग, चुट्टीमै मिल्छ सफलता